Ukubhuloga Izinyawo? Isisa Nokumaketha | Martech Zone
NgoMsombuluko, Januwari 4, 2010 NgoMsombuluko, Novemba 24, 2014 Douglas Karr
Enye yezinzuzo ezinhle zokubhuloga, twitter neminye imithombo yezokuxhumana ukuthi ihlinzeka ubuso bomuntu ebhizinisini lakho. Abantu bathenga kubantu futhi abantu bathenga ngokomzwelo, ngakho-ke womuntu umthelela ubalulekile.
Isu elilodwa amabhizinisi angakunaki ukufaka kulo isu lokuxhumana kwezenhlalo yimizamo yabo yokusiza… futhi lokho kuyiphutha. Ukuphromotha izinhlangano ezisiza umphakathi ezisekelwa yibhizinisi lakho kanye nabasebenzi bakho kuyindlela enhle yokunikela ngaphezu kwe-a uhlangothi lomuntu kubhizinisi lakho, inikeza uhlangothi olukhathalelayo. Futhi, ukukhuthaza izinhlangano zosizo osebenza nazo kuzosiza izinhlangano zosizo - imvamisa ezingenazo izinsiza ezenziwa yibhizinisi lakho!
Angikhulumi ngokuziqhayisa ngokuthi ibhizinisi lakho lenzela malini isibonelelo. Esikhundleni salokho, ukuxoxa ngemicimbi nokuthi abafundi bakho kanye nabalandeli bakho bangazisiza kanjani izinhlangano ezisiza umphakathi. Kulelo nothi, ngithanda ukwethula Izinyawo ZamaSamariya, inhlangano esiza abantulayo Martech Zone nenkampani yami, DK New Media, iyasekela:
Izinyawo ZomSamariya iyinhlangano engenzi nzuzo ezinikele ekushintsheni kwempilo yize kwasatshalaliswa iShoes of Hope emhlabeni wonke. Abantu abayizigidi ezingama-300 bavuka njalo ekuseni bengenazo izicathulo zokuvikela izinyawo zabo ekulimaleni nasezifweni. Inhloso Yezinyawo ZomSamariya ukuhlinzeka ngezicathulo 10 million walaba bantu eminyakeni eyishumi ezayo ngokubafundisa indaba eseBhayibhelini yokholo, ithemba, nothando, akhombise lawo maqiniso ngokubathinta ngokugeza izinyawo zabo, nangokubaphathisa izicathulo namasokisi amasha.
Izinyawo ZomSamariya zisendleleni - zihlinzeka ngaphansi nje 3 million wamabhangqa ezicathulo kuze kube manje!
UMartin Luther King, Jr. uthe,? Umbuzo ophikelelayo futhi ophuthumayo empilweni uthi: wenzelani abanye ?? Njengoba uJanuwari 18 esondela, sinethemba lokuthi uyalandela @ mthokozisindl4 futhi @sbahle_mpisane ukusekela nokusabalalisa izwi ngalesi sisa esihle. Uma ungathanda ukubhloga izinyawo, ngizokuthumela ifayela le- ikhophi yamahhala ye-eBook yami kanye nokusho okuthunyelwe kwebhulogi yakho ngosuku lwe-MLK!
Tags: imbangela yokumakethaUthandomarketingizinyawo zama-samaritans
Izimbangela: Charity + Facebook = WIN!